41 “Ungabata Revhiatani+ nechirauro kuti uibudise here,Kana kuti ungatsimbirira rurimi rwayo netambo here? 2 Ungaisa nhokwe mumhino dzayo,+Kana kuti ungaboora shaya dzayo nomunzwa here? 3 Ingakuteterera kazhinji here,Kana kuti ingataura mashoko manyoro kwauri here? 4 Ingaita sungano newe,Zvokuti ungaiita muranda nokusingagumi here? 5 Ungatamba nayo sezvaunoita neshiri,Kana kuti ungaisunga kuti vasikana vako vaduku vatambe nayo here? 6 Shamwari dzingaitengeserana here?Dzingaichekera-chekera vatengesi here? 7 Ungazadza ganda rayo nemiseve ine nzeve,+Kana kuti musoro wayo nemapfumo anobayiswa hove here? 8 Isa ruoko rwako pamusoro wayo.Yeuka kurwa kwacho. Usazviitazve. 9 Tarira! Zvinotarisirwa nomunhu pamusoro payo hazvizobudiriri.Munhu paanongoiona chete anoputsikira pasi. 10 Hapana munhu akashinga kwazvo zvokuti angaidenha.Zvino ndiani angamira pamberi pangu?+ 11 Ndiani akatanga kundipa chimwe chinhu, kuti ndimupe mubayiro?+Zviri pasi pematenga ose ndezvangu.+ 12 Handizorambi ndakanyarara pamusoro penhengo dzayoKana kuti pamusoro pesimba rayo nokunaka kwoukuru hwayo. 13 Ndiani akambofukura nguo yayo yokunze?Ndiani angapinda pakati peshaya dzayo? 14 Ndiani akambovhura masuo echiso chayo?Mazino ayo akapoterera anotyisa. 15 Mihoronga yemakwande ndiko kuzvikudza kwayo,Yakaita seyakavharwa nechisimbiso chakabata kwazvo. 16 Rimwe nerimwe rakabatana kwazvo nerimwe,Kunyange mhepo haikwanisi kupinda nepakati pawo. 17 Iwo akanamatirana;Akabatana uye haangaparadzaniswi. 18 Kuhotsira kwayo kunopenya kuchibudisa chiedza,Uye maziso ayo akafanana nokupenya kwemambakwedza. 19 Mumuromo mayo munobuda kupenya kwemheni,Munobudawo pfarivari dzomoto. 20 Mumhino dzayo munobuda utsi,Sevira romoto rabatidzwa nenhokwe. 21 Mweya wayo unoita kuti mazimbe abvire,Kunyange murazvo womoto unobuda mumuromo mayo. 22 Mumutsipa mayo munogara simba,Kushaya tariro kunokwakuka pamberi payo. 23 Mafinya enyama yayo anonamatirana;Akaita sechinhu chakaumbwa pairi, chisingazununguki. 24 Mwoyo wayo wakaumbwa zvakasimba sezvakaitwa dombo,Chokwadi, wakaumbwa zvakasimba seguyo. 25 Painosimuka, vane simba vanotya;+Vanoshamiswa nokuda kwokunetseka kwazvo. 26 Bakatwa haringaibayi,Kana pfumo, museve kana kuti runje.+ 27 Inoona simbi+ semashangawo zvawo,Mhangura semitiwo zvayo yakaora. 28 Museve haungaidzingi;Kwairi matombo echipfuramabwe+ anochinjwa kuva mashangawo zvawo. 29 Inoona tsvimbo seshangawo zvaro,+Uye inoseka kurira kwepfumo duku. 30 Pasi payo pakafanana nezvaenga zvakapinza;Inoita sokuti inokwekweredza chirei chokupurisa+ mumatope. 31 Inoita kuti nzvimbo dzakadzika dzivire sezvinoita hari;Inoita kuti gungwa riite sehari yemafuta okuzora. 32 Inoita kuti gwara rayo risare richipenya shure kwayo;Munhu angaona mvura yakadzika somusoro wachena. 33 Hapana chakafanana nayo panyika,Iyo yoga yakasikwa isingavhunduki. 34 Inoona zvinhu zvose zvakakwirira.Iyo ndimambo wezvikara zvikuru zvose.”